ABBAA GADAA moo ABBAA GADDAA? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsABBAA GADAA moo ABBAA GADDAA?
ABBAA GADAA moo ABBAA GADDAA?
-Abbaa Gadaa jechuun kan gaafa kichuun umrii 17 manaa harkifamee addabaabayiitti fannifamu callisuu miti, kan gaafa gootni ajjeefamu, jagni kumaan hidhaatti guuramu, kan gaafa Oromiyaan dirree lolaa, Oromomummaan yakka ta’u callisu miti.
-Abbaa Gadaa jechuun kan gaafa Oromoo qofa miti dhalli namaa kamiyyuu yoo haqa dhabe dura dhaabatee falmu, haqa dabe falmee sirreessu, dhugaa bade barbaadee galchudha. Abbaa Gadaa jechuun kan paartii takkaa fi abbaa irree tokkoof ergamee dhugaa uummataa ukkaamsu osoo hintaane, kan sagalee ukkaamameef sagalee ta’udha.
-Inni gaafa Oromoon akkanatti nagaa dhabu kolfu, inni gaafa Oromoon gaddu gammadu, inni gaafa xinnaa fi guddaan Oromoo jimlaadhan hidhaa fi ajjeechatti guuramu callisu kun maalidha yaa biyyaa? Wal dhabdee Oromoo gidduutti uumame kanaaf Oromoon akkamitti jaarsa araaraa tokko dhabee? Oromoon maalif Abbaa Gadaa tokko kan haqa lafaa fi lafee isaatif waltajjiitti ba’ee dubbatu dhabee?
-Inni uffata abbaa Gadaa uffatee osoo Oromoon addabaabayiittii fannifamuu waltajjiirraa kolfee gammadu kuni eenyuu? Inni osoo Oromoon Hospitaalaa fi Ambulaansii keessaa harkifamee akka bofaatitti tumamee ajjeefamuu waltajjiirraa kolfu kuni kamii yaa biyyaa?
-Walii dubbachuun maalif yakka ta’ee? Waliif yaadurra walitti yaadun maalif nutti salphatee? Guddaan maalif xinnaatee? Oromoon maalif sagalee walii ukkaamsee? Sirni Gadaa kana ni heeyyamaayii? Abbaa GADAA’ jedhamuun maalifii? Rakkoo Oromoo furuu caalaa, rakkoo Oromootitti kolfuun maalif aadaa nutti ta’ee?
-Guddaan keenya nu fuuldura dhaabatee maalif nurra dhaabatee? Maalif nu ukkaamsee? Inni osoo ilmaan Abbaa Gadaa ilmi Oromoo baddaa fi lagaa boo’uu kolfu kuni eenyuu? Abbaa Gadaa moo Abbaa Gaddaa?
Kana irraa maal barattu? Nafxanyaa tu qabatee hiriiraan bahe.Nu ajjeesaniiti reeffa keenyaan daldalachaa jiran.
አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ገንቢ ሚና እንዲኖራት ኢትዮጵያውያን ጠየቁ